Prime Minister Abiy Ahmed has betrayed young men in Oromia who brought him to power ~ Senator Chris Coons – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosPrime Minister Abiy Ahmed has betrayed young men in Oromia who brought him to power ~ Senator Chris Coons
Prime Minister Abiy Ahmed has betrayed young men in Oromia who brought him to power ~ Senator Chris Coons
-Oromiyaan kan warra ishee ajjeesee osoo hintaane, kan warra isheef hidhamee, wareegameeti! Oromiyaan kaleessas Kumaa Dammaqsaa fa’aadhan hin yaamamne, har’as ABIY AHMED
fa’aadhan hin yaamamtu!
-Oromiyaan kan Maammoo Mazammiri, kan Taaddasaa Birruu, kan Baaroo tumsaa fa’aati, kan Oromiyaan kan Laggasaa Wagii fa’aati, kan Eebbisaa Addunyaa fa’aati, Oromiyaan kan Haacaaluu Hundeessaa fa’aati, kan Musxafaa Huseen fa’aati, kan Jawaar Mohaammad fa’aati, kan Baqqalaa Garbaa fa’aati, kan Jaal Marroo fa’aati, kan Amaanu’eel Wandimmuu fa’aati, kan Kaffiyaaloo Tafarraa fa’aati!
-Oromiyaan kan warra isheerraa nyaatee ishee nyatee osoo hintaane, kan warra isheef gaaraa fi laga agabuu bulee, isheef
nyaatameeti! Seenan Oromoo fi Oromiyaa garaa aangoo fi maallaqaan hin barreeffamu, seenan Uummata Oromoo
dhiigaa fi lafee lubbuu qaalii gootota ilmaan Oromoo qofaan barreeffama!
-Oromiyaan teenya kaleessa har’aa fi boru, nu falmata dhiifnan abbaan biraa hinjiru! Itti horree, itti dhalannee, itti cabnee, itti hidhamnee, itti wareegamnee mirga lafaa fi lafee teenyaa sharafa malee, kadhaa fi gabbara malee qabsoo keenyan of ni kabachiifna! Oromiyaan kan warra ishee ajjeesanii osoo hintaane kan warra isheef wareegamaniiti!!
”Waadaa Cehumsa Dimokiraasii Abiy Ahimed cabe…”
Wal-tajjii koree senaaterootaa dhimma alaa US irratti Senaater Jeemsi Elrooy Riish, ”bara 2018 yeroo Abiy Ahimed aangootti dhufe biyyattii gara sirna dimokiraasiitti ceesisa jedhamee abdatamaa ture. Kana dhugoomsuun ni danda’ama ture. Garuu rakkoon addunyaa mudate weerarri Koroonaavaayirasii biyyichas miidhuun imalicha wal-xaxaa taasise” jedhan.
”Amma yaaddoo waraana Tigiraay keessaa qofa osoo hin taane cehumsi dinagdee fi dimokiraasii akka uummatni biyyattii hundi barbaaduun miti,” jedhan. Senaater Riish rakkoon biyyattii filannoo tokkoon qofa kan hiikamu miti. Isa irratti ammoo dirreen siyaasaa biyyattii keessatti abdatames dhiphateera jedhan. Ministera Dhimma Alaa Ameerikaatti, Bakka Bu’aan Barreessaa Biiroo Dhimma Afrikaa Roobert F Goodek, ”mul’anni Abiy jalqaba qabatee ka’e haala amma deemaa jiruun galma gahaa hin jiru” jedhan. ”Dirreen siyaasaa dhiphachuu, miidiyaaleerra dhiibbaan gahuu, gaazexessitootni ajjeefamuu, hidhamuu fi ari’amuu ilaalchisee rakkootu jira.”
Gabaasa guutuu dubbisaa;
Professor Al-Mariam jedhama gorsaa Abiyyi Ahimad.
Nuun kan eeguu ol gubbaa jira jedha. Namni kun nama tuffii guddaa oromoof qabuudha.
የወሎ ኦሮሞ አንድ ወጣት ለአቅምአዳም ከመድረሱ በፊት የኢላማ ተኩስ በወንድሞቹ በቤተሰቦቹ በአባቱ መሳሪያ ይማራል እና ለአቅመአዳም ሲደርስ ግን ሚስት ከማግባቱ በፊት ሸጋ የተወለወለች ሸሪፎ ክላሽ ሶስት ካርታ ጥይት በትጥቅ ይታጠቃል ከዚህ በኃላ ነው ሸግየዋን ቀሬ የሚያገባው ።
ለነገሩ የወሎ ኦሮሞ ቀሬ የሚመረጥ የለውም ሁሉም በቁንጅና እኩልና እጅግ በጣም ደስ የሚል ደምግባት ያላቸው ናቸው ፣ ፀጉራቸው ዞማ ነው ፣ አይናቸው ገራሚ የሚያፈዝ ነው ። በቃ ውበት ቁንጅና ጀግንነት ለወሎ ኦሮሞ የፈጣሪ የተቸረ ነው ።
እንደ ወሎ ኦሮሞ ቄሮ በፊንፊኔ በወለጋ በአርሲ በባሌ በሃረርጌ በኢሉአባቦራ በሸዋ ድፍን ቄሮ ቢታጠቅ ቢደራጅ አይደለም ኢትዮጵያ ጥንታዊን የኩሽ ምድር ያስከብር ነበር ።
ግን የጊዜ ጉዳይ ነው አይቀርም ።
Galmi Abbaa Muudaa Tuulamaa eebbifame
Ethiopia government plans to stage massive protests against what it calls foreign interference in Ethiopian affairs